daawo naaska iga tuuji gabdhaha maxey u dhahaan - iftineducation.com
daawo naaska iga tuuji gabdhaha maxey u dhahaan
iftineducation.com – daawo naaska iga tuuji gabdhaha maxey u dhahaan
Sidaan ayaad iskaga ilaalin kartaa biya bax deg deg ah Ee ku dhaca Sida dumarka looga keensado in ay kaa hor biya baxaan.
Hadda waxaan sheegaynaa qaababka ugu Òican ee loogu tago dumarka xiliga galmada si ay u dareemaan raaxo macaan badan Ma doonaaysaa in mar walbo xaaskaagu ay kaa hor biyo baxdo?
oo ay aad kuu jeclaato Hadaba dhinacyadaan hoos ku xusan ka mar. Nuuca koobaad ee ugu muhiimsan: ee galmada ee dumarku giriirka ka qaadaan waa midda bahalku uu xoog u garaayo qankiirka kintirka hoostiisa ku yaallo xaaskaaga gadaal ayaad kaga imaanaysaa adiga oo farjiga uga galmoonaya iyadoo jiifta adiguna jilbaha ayaad ku istaagaysa,
lugaheeda kor ayaad u taagaysaa.Markaad dhinacaan ka marayso ha iloobin inaad hoosta barkin ka geliso. markaad dhinacaan ka marto jirkeedu waxa uu soo daynayaa dheecaano fara badan kuwaaasoo aad ku arkayso inay kasoo burqanayaan xubinteeda taranka.
Sawiro: 5 Caruur ISIS katirsan oo tooganaysa 5 maxbuus